» को बन्ला भोईस अफ नेपालको विजेता ? यस्तो छ सम्भावना
को बन्ला भोईस अफ नेपालको विजेता ? यस्तो छ सम्भावना
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:३२
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २१ साउन । चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भोईस अफ नेपाल सिजन ३’ को फाईनल यही शनिबार हुँदैछ । पहिलो सिजनमा सिडी बिजय अधिकारी र दोस्रो सिजनमा राम लिम्बुलाई विजेता बनाएको भोईस अफ नेपालले यो साता नेपाललाई तेस्रो विजेता दिनेछ । यो साता भोईस अफ नेपाल सिजन ३ को विजेता बन्नका लागि आर्यन तामाङ, तारा श्रीस मगर, ज्वाला राई र किरण गजमेरले दमदार भिडन्त गर्दैछन् । यी ४ मध्ये कुनै एक प्रतियोगी नै भोइसको तेस्रो सिजनको विजेता बन्नेछन् । आखिर को बन्ला त भोईस अफ नेपाल सिजन ३ को विजेता ? कसको छ जित्ने बलियो सम्भावना ? हामी यस भिडियोमा यसै बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
अहिलेसम्म एकपटक पनि बटम लाईनको सामना नगरेका आधारमा हेर्ने हो भने आर्यन तामाङ र तारा श्रीस मगर सबैभन्दा अगाडि छन् । उनीहरुले लाईभ शोमा प्रवेश गरेर फाईनलमा आईपुग्दा एकपटक पनि बटम लाईनको सामना गरेका छैनन् । त्यस्तै ज्वाला राईले एक पटक बटम लाईनको सामना गरेका छन् । उनले लाईभ शोमा उत्कृष्ट १० को छनौटको क्रममा पहिलो पटक बटम थ्रीको सामना गरेका थिए । त्यस्तै किरण गजमेरले लाईभ शोमा उत्कृष्ट ११ को छनौटको क्रममा र उत्कृष्ट ८ को छनौटको क्रममा गरी २ पटक बटम थ्रीको सामना गरेका थिए । यसरी बटम लाईनको आधारमा हेर्ने हो भने आर्यन र तारा पहिलो नम्बरमा, ज्वाला दोस्रो स्थानमा र किरण तेस्रो स्थानमा छन् ।
यी ४ प्रतियोगीहरुले अहिलेसम्म पाएको अवार्डहरुका आधारमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म दुई वटा अवार्ड जितेर तारा श्रीष मगर पहिलो नम्बरमा छिन् । उनले उत्कृष्ट ११ को प्रस्तुतिका क्रममा र उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुतिका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । लाईभ शोमा सर्वाधिक अवार्ड जित्ने उनी एकमात्र प्रतियोगी हुन् । उनी भोईस अफ नेपालकै ईतिहासमा फाईनलमा पुग्ने पहिलो महिला प्रतियोगी पनि हुन् । यसअघिको दुई सिजनमा कुनै पनि महिला प्रतियोगी फाईनलमा पुगेका थिएनन् । त्यस्तै अवार्डकै आधारमा हेर्ने हो भने आर्यन तामाङ र किरण गजमेर दोस्रो नम्बरमा छन् । उनीहरु दुबै जनाले एक–एक वटा अवार्ड जितेका छन् । आर्यनले लाईभ शोको पहिलो एपिसोडमा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए भने किरणले उत्कृष्ट ११ को प्रस्तुतिका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । अवार्डका आधारमा ज्वाला अरुभन्दा पछाडि छन् । उनले लाईभ शोमा कुनै पनि अवार्ड जितेका छैनन् ।
दर्शक र श्रोताहरुको कमेन्टहरुका आधारमा हेर्ने हो भने यी चारै जना प्रतियोगीहरु निक्कै प्रभावशाली देखिएका छन् । दर्शकहरुमाझ चारै जना फाईनल प्रतिस्पर्धीहरुले राम्रो चर्चा पाएका छन् । तारा भर्सटाईल गायिकाका रुपमा चिनिएकी छिन् भने आर्यन मेलोडियस आवाज र ईनोसेन्सका कारण चर्चित छन् । भोईसमा आउनुपूर्व नै चर्चामा रहेका ज्वाला उनका प्रशंसकहरुमाझ सुरुदेखि नै चर्चामा छन् भने किरणको फ्यान फलोईङ पनि निक्कै देखिन्छ । यी विभिन्न आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यी चारै जना प्रतियोगीहरको विजेता बन्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । तर दर्शक भोटका आधारमा एक जनाको जित हुने भएकोले कुन प्रतियोगीले जीत हासिल गर्लान् भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तपाईको विचारमा यी प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगीले भोईसको तेस्रो सिजन जित्लान् जस्तो लाग्छ ? कृपाय कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–